समृद्धिको चित्र, विकास विचित्र : देवघाटमा सडकको बीचमै रूख राखेर कालोपत्रे – Himalitimes
२०७७ मंसिर ६ ०६:२९ मा प्रकाशित
काठमाडौ । देशको बजेट कहाँ खर्च भइरहेको छ ? कसरी खर्च भइरहेको छ ? चितवन देवघाटको यो चित्रले देशको विचित्र विकासलाई प्रस्ट देखाउँछ ।
न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरी बनाइएकाले सडकबाट दुर्घटनासमेत बढी हुने डर बढेको छ । विगतमा समेत यस सडकमा रूखमा ठोक्किएर, हाँगा खसेर धेरै दुर्घटना भएका छन् ।( नयाँ पत्रिकाबाट )